တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်က ၁၄ ကြိမ်မြောက် BRICS ထိပ်သီးအစည်းအဝေး လက်ခံကျင်းပမည် - Xinhua News Agency
ပေကျင်း၊ ဇွန် ၁၇ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီကျင့်ဖိန်သည် ပေကျင်းမြို့၌ ၁၄ ကြိမ်မြောက် BRICS ထိပ်သီးအစည်းအဝေးအား ဇွန် ၂၃ ရက်တွင် လက်ခံကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း တရုတ်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူက ဇွန် ၁၇ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
ထိပ်သီးအစည်းအ‌ဝေးအား “အရည်အသွေးမြင့်မားသော BRICS မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးကို မြှင့်တင်လျက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ခေတ်သစ်ကို ဖွင့်လှစ်စို့” ဟူသော ခေါင်းစဉ်အရ အွန်လိုင်းပုံစံဖြင့် ပြုလုပ်သွားမည်ဟု ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဟွာချွမ်းရင်က ပြောခဲ့သည်။
သမ္မတ ရှီသည် ဇွန် ၂၄ ရက်တွင် ပေကျင်းမြို့၌ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အဆင့်မြင့်ဆွေးနွေးပွဲကို လက်ခံကျင်းပမည်ဖြစ်ကြောင်း ဟွာက ဆိုသည်။ အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲကို “စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက် ၂၀၃၀ ပြည့်နှစ် အစီအစဉ်ကို ပူးတွဲအကောင်အထည်ဖော်ရေး ခေတ်သစ်အတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေး မြှင့်တင်မည်” ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အွန်လိုင်းပုံစံ ကျင်းပပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပြီး အစည်းအဝေးသို့ BRICS ခေါင်းဆောင်များနှင့် ဆက်စပ်သော ပေါ်ထွန်းစဈေးကွက်များနှင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများမှ ခေါင်းဆောင်များ တက်ရောက်ကြမည်ဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ သမ္မတ ရှီသည် ဇွန် ၂၂ ရက်တွင် အွန်လိုင်းပုံစံဖြစ်ကျင်းပမည့် BRICS စီးပွားရေးဖိုရမ် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်မည်ဖြစ်ကာ မိန့်ခွန်းပြောကြားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဟွာက ဆိုသည်။ (Xinhua)
President Xi to host 14th BRICS Summit
Source: XinhuaEditor: huaxia2022-06-17 12:12:30
BEIJING, June 17 (Xinhua) — Chinese President Xi Jinping will host the 14th BRICS Summit in Beijing on June 23,aChinese Foreign Ministry spokesperson announced here Friday.
Spokesperson Hua Chunying said the Summit will be held in virtual format under the theme of “Foster High-quality BRICS Partnership, Usher inaNew Era for Global Development.”
Hua said President Xi will host the High-level Dialogue on Global Development in Beijing on June 24. The Dialogue will be held in virtual format under the theme of “FosteraGlobal Development Partnership for the New Era to Jointly Implement the 2030 Agenda for Sustainable Development,” and BRICS leaders and leaders of relevant emerging markets and developing countries will attend the event.
President Xi will attend the opening ceremony of the BRICS Business Forum in virtual format and deliverakeynote speech on June 22, Hua said. ■
တရုတ်-အလယ်အာရှ ပိုက်လိုင်းက သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ကုဗမီတာ ဘီလီယံ ၄၀၀ ကျော် ပို့လွှတ်